Apple maara otu esi eme ego | TeraNews.net
Apple nwere ike ịkpata ego
na-ede akwụkwọ nka E bipụtara 05.02.2018
Ndị nyocha Apple kọrọ akụkọ banyere ire ahịa amaja maka nkeji iri na ise gara aga, na-enye njikwa akụkọ abụọ - nke ọma na ihe ọjọọ. N'ime akụrụngwa akụrụngwa sitere na atụmatụ ekwuputara na nde 100 nkeji, ọ ga - ekwe omume ịghọta naanị nde 77,3 nkeji - 77% nke ebum n'uche ahụ. Agbanyeghị, n'okwu ego, n'ihi ọnụego flagship iPhone X, akara ndị America jisiri ike nweta ego ndekọ nke ijeri dollar 88,3.
Kpọọ otu afọ gara aga, mgbe mkpesa nke otu ụzọ n'ụzọ anọ maka otu oge ahụ, ndị na-agbakọọ ego kwuru na uru na ijeri dollar 78,4, nke bụ $ 10 ijeri na-erughị afọ 2017. Nyere na 70% nke ahia bu ahia mba ofesi.
Mana ọ dị anya Apple imeghe champeenu, n'ihi na otu afọ, ndị ahịa agbanwebeghị ụdị akara dị ala na ngwaọrụ ndị dị ọnụ. Ndị na-eme nyocha na-ekwu na uru ụlọ ọrụ ahụ nyere ekwentị iPhone X nke nwere ọnụ ahịa 999 dollar. N'ihe banyere ọnụ ọgụgụ ngwaọrụ rere, ikike ahụ na-agbada. MAC kọmputa na smartphones agbadatala, dịka ọnụọgụ ndị ahụ gosiri.
Banyere otu "ngwaahịa ndị ọzọ", nke gụnyere isi, elekere, Apple TV na ihe ndị ọzọ, ebe a, na ntụle, ị nwere ike ịhụ mmụba nke ahịa site na 36% (ijeri dollar 5,5). Site na ngwa Apple, akara ahụ jisiri ike nweta 18% karịa karịa n'oge gara aga (ijeri dollar 8,5 dollar).